Digital | ဇော်မျိုး
MP3 & MP4 နှင်. Digital ပြဿနာ ဖြေ၇ှင်းနည်းများ
ဆ၇ာ သန်းထိုက်(ေ၇ွှ၇ိပ်)ေ၇းတဲ. ဒစ်ဂျစ်တယ် ပစ္စည်းလုပ်ဆာင်မှုများ နှင်. ပြသနာဖြေ၇ှင်းနည်း စာအုပ်ပါ။
MP3 MP4 နဲ. Digital ပစ္စည်း လက်ဝယ် ၇ှိသူတိုင်း ဖတ်သင်.တယ်လို. ထင်ပါတယ်
ေ၇းထားတာလေးတွေ ဖတ်ပြီး ပြဿနာ များ ဖြေ၇ှင်းနိုင်ပါစေ………..
Filed under book Tagged with Digital